1. Kedu ihe dị oke mkpa na mmiri Na-enye agba mara mma nke agba Gbakwunye tinye uto na uto zuru oke Ọ bụ nnukwu shuga Ma ị kwenyere na nke ahụ Kedu otu esi eme icing? Supernye ga-eche na ọ dị oke mfe, na ị nwere ike iburu ngwa ọrụ niile ị nwere n'ụlọ gị, na kichin, jiri ya fesa achịcha gị nke ọma ma mee ka ha nwee nganga na nke ahụ. Ọ bụ ezigbo usoro eji arụ ụlọ. Na ule nke obi uto ma obu onye obula nke na acho ego ozo site na isi. Ka anyi mee ya iji belata onu ahia n’otu oge ka nma.
2. Kedu ihe bụ shuga shuga? Ọ bụ n'ezie shuga nke siri na usoro egweri ọma. Ọdịdị dị ọcha ntụ ntụ O nwere ihe dịka pacenti 3% were tinye ya ka ihe eji ete nri. Mmiri mmiri ahụ dị mma na-enweghị akara akara ọhụụ. Ọ bụkwa nchikota ude iji chọọ achicha mma, donuts ma mee ka ụmụ bebi chọọ icho mma desserts n'ụzọ zuru oke. Karịsịa, ọ dị mfe ịme naanị gị, na-enyere aka belata ọnụahịa nke ịzụta ihe ọkụkụ. Ọ dị mfe ịchọta, dị mfe iji ihe ndị a:
3. Enwere naanị ihe 3 nwere ike ịchọta n'ụlọ ọ bụla na -eme shuga shuga: gram gram 150.
4. Kwa 11 grams nke ọka stachi na blender
5. Malite na shuga. Wunye n'ime blender Ma spinning juputara Site n'iji oge ntụgharị, ọ bụghị ogologo, ihe dị ka sekọnd 20-30
6. • Mgbe ahụ chọpụta ma shuga agwakọtara dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na enwere mpempe akwụkwọ ọ bụla, tụgharịa ha ọzọ. Ruo mgbe ọ dị mma, ọ dị ka obere ntụ ntụ • Mgbe shuga gwakọtara nke ọma. Tinyezie ntụ ọka n’ime ụzọ ndị ahụ e kwuru n’elu. Gwakọta ihe abụọ ahụ maka ihe dịka 10 sekọnd.
7. • Lelee na ihe ndị ahụ agwakọtara nke ọma yana ntụ ntụ dị mma. Emechara ya. Mgbe ahụ echekwa ya n'ime akpa akara. Iji jiri dị mfe
8. Tinye ihe uto na obi uto site na icing emebere ulo. N'ihi na nri na-echegbu nhọrọ nke ihe ndị dị mma Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmepụta akụrụngwa Ma ọ bụ tinye na nri anyị mere n'ụlọ Na mgbakwunye na ịnwe uto pụrụ iche Mara mmalite Ọ na-enye aka n'ibelata ụgwọ n'ihi na ọ bụ ihe enwere ike ịchọta gburugburu ememme ahụ. Ka anyi mee shuga icing Mee ka achicha ma ọ bụ achịcha dị ha mma Mee ka ndi n’eri rie uto nke anyi n’acho ime Ezokwara ịhụnanya, nlekọta na ịhụnanya N’ime swiiti niile nke swiiti ahụ, e meziri uwe mwụda ndị ahụ mma Ma ọ bụ ịkpọ ụmụaka ka ha mee ụmụ bebi na mejupụtara achịcha bụ ọrụ niile na-eme ka ncheta. Na-amụmụ ọnụ ọchị ezinụlọ Karịrị ihe ụtọ dị ụtọ